Dowladda oo baareysa Ganacatada Dhaqaalaha ku taageera Al-Shabaab | Mustaqbal Radio
Home - Wararka Somalia - Dowladda oo baareysa Ganacatada Dhaqaalaha ku taageera Al-Shabaab
Golaha xukuuadda, Sawirka: Yuusf Garaad
Dowladda oo baareysa Ganacatada Dhaqaalaha ku taageera Al-Shabaab
July 14, 2017	44 Views
Kismaayo: Hay’adaha ammaanka ee Dowladda Somaliya, ayaa hindisay qorshe cusub oo ay ku sheegeen in lagula dagaalamayo Xarakada Al Shabaab, si looga guuleysto dagaalka ay dowladdu kula jirto Shabaab.
Dagaalkii dhinaca militariga ee Shabaabka lagula jiray, ayay hadda Dowladda Somaliya bilowday inay ku soo biiriso qorshe kale, oo Shabaabka loogala dagaalamayo kuwa fekerkooda taageera iyo weliba kuwa kale ee dhaqaalaha siiya.
Wasiirka Warfaafinta Somaliya, C/raxmaan Cumar Cismaan (Injineer Yariisow) oo faah faahin ka bixinayay shirkii Golaha Wasiirada, ay Khamiistii ku yeesheen Magaalada Kismaayo, ayaa tilmaamay in sidoo kale shirkaasi lagu soo bandhigay hindisahan, oo uu soo bandhigay Wasiirka Amniga Qaranka, Maxamed Abuukar Islow (Ducaale).
“Waxaa kaloo warbixin laga dhageystay Wasiirka Amniga Qaranka oo la xiriira amniga dalka oo dhan, waxaana la go’aamiyay in cid alaala iyo ciddii taageerta fekerka argagixisida iyo siyaasadeeda ama dhaqaale ku taageerta in tallaabo sharci ah laga qaadi doono.” Ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta.
Wasiirka, ayaa ku waramaya in laamaha ammaanku ay sheegeen in ay ku daba-jooggan dad fara-badan, oo shaqo ka dhigtay in dhaqaalo ku taageeran kooxaha Dowladda Ka soo horjeeda.
“Hay’adaha amniga waxay sheegeen inay ku raadjooggan dad fara-badan oo caadeystay inay gargaaran argagixisada, tanoo loo arkay in amniga iyo nabadaynta dalka ay khatar ku tahay.” Ayuu yiri Wasiir Yariisow.